Wararkii Ugu Dambeeyey Qarixii Kadhacey Muqdisho.
Qarax xoogan oo gabal-dhicii maanta kadhacey magaalada muqdisho ayaa geystey qasaare isugu jiraa naf iyo maal Weerarkaan oo lala eegtey hoteelka naasa hablood-2 degmada xamar weyne ee magaalada muqdisho ayaa wuxuu imaanaya 14-maalmood kadib xasuuqii 14-kii bishan kadhacey...
Qaraxyo Is Xig-Xigay Oo Kadhacey Magaalada Muqdisho.
Daqiiqado ka hor ayaa qarax ismiidaamin ah lagu dhuftey al-baabka hore hotel naasa hablood-2 kaasoo ku yaala degmada xamar weyne ee magaalada muqdisho. Weerarkan oo ku bilowdey gaari lagu soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa waxaa xigey dabley hubeysan oo gudaha u galey hotelka....
Shirkii Lagu Wadey Inuu Maanta Ku Qabsoomo Muqdisho Oo Baaqdey.
Maanta oo sabti ah ayaa lafilayey in magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya ka furmo shir-wadatashi ah oo udhaxeeya madaxda dowlada goboleedyada iyo dowlada federaalka soomaaliya. War wasiirka arimaha gudaha uu siiyey saxaafada ayuu ku sheegey in shirkii maanta lagu...
Shir U dhaxeeya Dowlada Federaalka Iyo Maamulgoboleedyada Oo Maanta Lafilayo Inuu Kadhaco Magaalada Muqdisho.
Waxaa maanta lafilayaa in magaalada muqdisho uu kaqabsoomo shirwadatashi ah oo u dhaxeeya madaxda dowlada federaalka iyo dowladaha xibnaha ka ah. Shirkan ayaa looga hadli doonaa xalinta khilaafaadka udhaxeeya dowlada iyo golaha iskaashiga maamulgoboleedyada, amaanka dalka,...
Al-Shabaab Oo Duqeeyay Saldhiga Ay Leeyihiin Ciidamada Jubaland.
Sida ay sheegayaan wararka ay heleyso warbaahinta arlaadii.net xarakada al-shabaab ayaa duqeyn ka geysatey deegaanka buulo gaduud ee hoos yimaada gobolka jubada hoose ee maamulka jubaland. Saldhigaan ayaa horaantii bishii September lagu laayey askar fara badan oo maamulka...
Ra’iisal wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa lakulmey madaxweynaha dalka turkiyga recep tayyip erdogan si uu ugala hadlo xiriirka soomaaliya iyo turkiga. Ra’iisal wasaare xasan cali kheyre oo dalka turkiga tagey maalmo kahor ayaa lakulmey madax kala duwan oo turki ah sida...
wararka ay heleyso warbaahinta arlaadii.net ayaa sheegaya in qaar kamid madaxda maamul goboleedyada ay soo gaari doonaan magaalada mudisho si ay uga qayb galaan shirka lagu madalsanyahay inuu 28-bishan kadhaco magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya. Madaxda lafilayo inay...
Al-shabaab ayaa haweeney ku diley degmada saakow ee gobolka jubada dhexe kadib markii ay ku eedeeyeen haweeneydan inay ku dhacdey fal sino ah iyagoo sheegay inay sameysay labo guur. Wararka ay heleyso warbaahinta ayaa sheegaya in haweeneydan ay ka tagtey ninkeedii hore kadib...
Madaxweyne Farmaajo Oo Shacabka Ugu Baaqey Nabadeynta Dalka Inay Ka Qayb-Qaataan.
Madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay inuu socdo qorshe al-shabaab looga sifeeynayo guud ahaan dalka soomaaliya. Madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay ciidamadu inay udiyaar garoobeen kasifeynta al-shabaab deegaanada ay kaga suganyihiin dalka soomaaliya....
Taliyaha Booliiska Gobolka Bay Col. Mahad Oo Xoog Kula Wareegey Xafiiska Gudoomiyaha Maxkamada Sare Ee Maamulk Koonfurgalbeed.
Sida ay sheegayaan warar hada nasoo gaarey Col. Mahad c/raxmaan taliyaha booliska gobolka bay ayaa abood kula wareegay xafiiska gudoomiyah maxkamada sare ee maamulka koonfurgalbeed. Taliya oo watey ciidamo fara badan oo ku hubeysan hubka noocyadiisa kala duwan ayaa lasheegey inuu...